मलेशियामा ५ सयभन्दा बढी इलिगल पक्राउ | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
मलेशियामा ५ सयभन्दा बढी इलिगल पक्राउ
Posted on मार्च 30, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी
अध्यागमन विभाग, प्रहरी, रेला र क्वालालम्पुर सिटी हल (डिबिकेएल) ले उद्योगहरूमा पुगेर कामदार पक्राउ गरेका हुन्। मलेसियामा करिब २ लाख विदेशी कामदार अवैध रूपमा कार्यरत छन्। विदेशी कामदारमा बढी इन्डोनेसिया र बंगलादेशका छन्। व्यवसायीका अनुसार मलेसियामा ५० हजार नेपाली कामदार अवैध रूपमा कार्यरत छन्। अवैध रूपमा बसिरहेका विदेशी कामदारले लेभी पनि तिदैनन्। उनका अनुसार सुरक्षागार्ड अलि बढी सुरक्षित छन् भने अन्य क्षेत्र बढी प्रभावित छन्।
यसले मलेसियाको राजस्वमा ठूलो असर गरिरहेको छ। संस्थागत रूपमा मलेसिया गएका कामदारको लेभी अहिले रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने गरेको छ। मलेसियालेे फेब्रुअरी २४ बाट स्विप अपरेसन अन्तर्गत धरपकड सुरु गरेको हो। मलेसियाको अनलाइन समाचार एजेन्सी बर्नामाका अनुसार यो कार्यक्रमअन्तर्गत एक साताभित्रै १ सय ४४ जना पक्राउ परिसकेका छन्। पक्राउ पर्नेमा नेपाल, म्यानमार र बंगलादेशका नागरिक रहेको बर्नामाले जनाएको छ। मलेसियाको चोकिट र पेटालिङ क्षेत्रबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। ‘२० देखि ५० वर्षका यी नागरिकसँग मिति नाघिसकेको कागजपत्र भेटिएको छ,’ अनलाइनमा भनिएको छ। पक्राउ परेमध्ये १९ जना महिला छन्।
नेपाली सुरक्षागार्डको क्लिनिक
एक जना नेपाली सुरक्षा गार्ड काम गर्न आए पनि क्लिनिक सञ्चालन गरेर उपचार गरिरहेको पाइएको छ। उनी मलेसियाको जलान सिलाङमा रहेको तलेजु प्लाजाको चौथो तल्लामा क्लिनिक खोलेर चिकित्सकको काम गर्दै आएका थिए।
उनले नेपा डिबिकेएल लिमा साइनबोर्ड राखेर नेपालीको उपचार गर्दै आएका थिए। मलेसिया सरकारले थालेको स्विप अपरेसनबाट उनले अवैध क्लिनिक राखेर चिकित्सकका रूपमा काम गर्दै आएको तथ्य पत्ता लागेको हो। उनको भिसामा सुरक्षागार्डको श्रम अनुमति (वर्कपरमिट) उल्लेख छ। डिबिकेएल स्वास्थ्य तथा वातावरणका सहायक अधिकृत साफी फेनले सुरक्षागार्डमा आएको व्यक्तिले क्लिनिक सञ्चालन गर्नु आर्श्चयजनक रहेको बताए।
« युनिटीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति फसे नराम्रो सँग बेलायतका लागि पूर्वनेपाली राजदुत »